Baiboly pejy 707 - Ny Baiboly
Voalohany < 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 Manaraka
Fanambaràna toko 9 (tohiny)
20Tsy nibebaka hiala amin'ny asan-tànany anefa ny olona sisa tsy matin'ireo loza ireo, mba tsy hivavahany amin'ny demony sy ny sampy volamena sy volafotsy sy varahina ary vato aman-kazo, izay mahajery na mahare na afa-mamindra akory; 21tsy nisy nibebahany koa na ny vonoan'olona, na ny ody mahery, na ny fijangajangana, na ny halatra nataon'izy ireo.
8Ary niteny tamiko indray ilay feo reko avy any an-danitra, nanao hoe: Mandehana alao ny boky kely mivelatra eny an-tànan'ilay anjely mitsangana eo ambonin'ny ranomasina sy ny tany. 9Dia nankany amin'ilay anjely aho sy nilaza taminy hanome ahy ny boky, ka hoy ny navaliny ahy: Raiso ka atelemo izy; hangidy izy ao an-kibonao, nefa ho mamy toy ny tantely eo am-bavanao. 10Noraisiko ny boky teny an-tànan'ilay anjely, dia nateliko avokoa, ka mamy toy ny tantely izy tao am-bavako, fa nony nateliko kosa, dia tsaroako nangidy tao an-kiboko. 11Tamin'izay dia nisy nilaza tamiko hoe: Olona maro sy firenena maro sy fiteny samihafa ary mpanjaka maro koa no tsy maintsy mbola haminanianao.
Fanambaràna toko 11
Ny Vavolombelona roa - Ny famonoana azy sy ny hitsanganany amin'ny maty - Ny trompetra fahafito - Vohana ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra.
1Ary nomena volotara toy ny tehina aho, dia nisy nilaza tamiko hoe: Mitsangàna, refeso ny tempolin'Andriamanitra, sy ny otely, mbamin'izay mivavaka ao. 2Avelao anefa fa aza refesina ny efi-trano fidirana ivelan'ny tempoly, satria efa nomena ny jentily io, ka hanitsaka ny tanàna masina roa amby efapolo volana izy. 3Ary ny Vavolombeloko roa, dia homeko hery haminany enim-polo amby roan-jato sy arivo andro; akanjo malailay no hiakanjoany.
4Izy ireo no fototr'oliva roa sy fanaovan-jiro roa, izay mitsangana eo anatrehan'ny Tompon'ny tany. 5Ka raha misy te-hanisy ratsy azy ireo, dia hisy afo mivoaka avy any am-bavany handevona ny fahavalony, ary hovonoina toy izany avokoa izay mitady hamely azy. 6Manam-pahefana hanidy ny lanitra izy ireo, mba tsy hilatsahan'ny ranonorana amin'ny andro haminaniany; sady manam-pahefana amin'ny rano koa izy, ka mahova azy ho rà, sy hamely ny tany amin'ny loza rehetra isaky ny te-hanao izany izy.
7Ary rahefa vita ny fanambaran'izy ireo, dia hiady aminy ilay Biby hiakatra avy amin'ny lavaka tsy hita noanoa, ka haharesy azy sy hahafaty azy; 8ary ny fatiny dia hiampatra eo an-kianjan'ny tanàna lehibe izay atao amin'ny teny an'ohatra hoe: Sodoma sy Ejipta, eo amin'ilay namantsihana ny Tompony tamin'ny hazo fijaliana.
9Olona samihafa firenena sy foko sy fiteny ary fanjakana no hijery ny fatiny miampatra eo, hateloan'andro sy tapany, fa tsy havelany halevina any am-pasana izy ireo. 10Hifaly ny mponina ety ambonin'ny tany noho ny amin'izy ireo; hiara-miravoravo sy hifanati-javatra izy ireo, fa nampijaly ny mponina tety an-tany ireo mpaminany roa ireo. 11Nony afaka hateloana sy tapany anefa, dia nisy fanahin'aina avy amin'Andriamanitra, niditra tamin'ireo faty ireo, ka nijoro tamin'ny tongony izy, ary raiki-tahotra mafy izay nahita azy. 12Sady injay koa nisy feo avy any an-danitra nanao taminy hoe: Miakara aty. Dia niakatra any an-danitra tao anatin'ny rahona, sy teo anatrehan'ny fahavalony izy ireo. 13Ary tamin'izany ora izany, dia nisy horohoron-tany mafy, ka nirodana ny ampahafolon'ny tanàna, ary olona fito arivo no matin'izany horohoron-tany izany. Raiki-tahotra ny olona sisa ka nanome voninahitra ny Andriamanitry ny lanitra.
14Lasa ny loza faharoa; indro hisosoka faingana ny loza fahatelo.
15Dia nitsoka ny trompetra ny anjely fahafito, ka nisy feo mahery avy any an-danitra nanao hoe: Lasan'ny Tompontsika sy ny Kristiny ny fanjakan'izao tontolo izao, ka hanjaka mandrakizay mandrakizay izy.
16Tamin'izay ireo Anti-dahy efatra amby roapolo, nipetraka tamin'ny seza fiandrianany teo anatrehan'Andriamanitra, dia niankohoka nitsaoka an'Andriamanitra, 17nanao hoe: Misaotra anao izahay, Tompo ô, Andriamanitra tsitoha izay ankehitriny sy taloha, fa naneho ny herinao lehibe hianao, ka manjaka izao. 18Nisarangotra ny firenena, fa tonga ny fahatezeranao, sy ny fotoana hitsarana ny maty, mba hanomezana valisoa ny mpanomponao, dia ny mpaminany, sy ny olo-masina mbamin'izay natahotra ny anaranao, na kely na lehibe, ary mba hamerezana izay nanimba ny tany.
19Dia novohana ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra, ka niseho teo anatin'ny tempoliny ny fiaran'ny fanekena; ary nisy tselatra sy tabataba ary kotro-baratra sy horohoron-tany mbamin'ny havandra vaventy.
3Ary nisy famantarana hafa koa niseho teny an-danitra, dia Dragona mena lehibe anankiray nitranga tampoka, fito ny lohany, folo ny tandrony, ary satro-boninahitra fito no teny an-dohany. 4Nofinaokany tamin'ny rambony ny ampahatelon'ny kitan'ny lanitra ka nazerany tamin'ny tany. Dia nijoro teo anoloan-dRavehivavy hiteraka izy mba handrapaka ny Zanany, raha vao teraka. 5Tera-dahy Ravehivavy, ary io Zanany io no hifehy ny firenena rehetra amin'ny tsora-by, ka nakarina ho any amin'Andriamanitra eo anilan'ny seza fiandrianany.
Pejy: Voalohany < 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 Manaraka
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3775 seconds